INFINITE: G ISN IS B IT Ọ? Kedu ihe ọ pụtara? OZI NA ỌZỌ
Infinity: gini bu ihe? gịnị ka ọ pụtara? ojiji na ihe ndi ozo
You nwetụla mgbe ị na-eche ihe bụ infinito? Taa ị ga-enwe ohere ịkọwapụta ihe niile metụtara isiokwu a na-adọrọ mmasị nke nwere ọtụtụ mmadụ n'isi ha, echefula ya.
2 Ihe nnọchianya
3 N'ihe dị iche iche
3.2 Na akụkọ ihe mere eme
3.5 Nkà ihe ọmụma
Ọ bụ okwu iji gosi na enweghị njedebe, enweghị oke, enwere mgbe ebighi ebi na ọtụtụ ihe dị na mbara igwe ruo na oke Chukwu. Maka ọtụtụ ndị infinito ọ bụ naanị echiche ịchọ ịkọwa ụfọdụ ihe toro ogologo. Ọzọkwa ịkọwa ihe na-anaghị agwụ agwụ; Ejirila okwu ahụ kọwaa ihe niile metụtara mgbe ebighi ebi, na-adịgide adịgide, na-enweghị ngwụcha ma ọ bụ ihe karịrị nke kachasị anya.
N'akụkụ dị iche iche nke sayensị a kọwara ya dị ka nrụtụ aka maka ihe ma ọ bụ oke na-enweghị oke ma ọ bụ njedebe. O megidere oke oke na mgbakọ na mwepụ ọ na - emegide okwu nwere oke, amachi; akọwapụtara na a Ebighebi akara ebe enwere eriri okirikiri na-enweghị isi okwu na-agbagọ ibe ha (∞).
Banyere akara ngosi ahụ, anyị nwere ike ịsị na e jikọtara ya na eziokwu na enwere ike ịkọwa ya ma ọ bụrụ na o nwere mbido ma ọ bụ njedebe, a chọpụtaghị ya ebe ọ malitere na otu o si amalite, yana ebe ọ malitere; eziokwu ahụ bụ na taa a kọwara ya n'ọtụtụ ọzụzụ ma mata ya dị ka asatọ ụgha.
N'ihe dị iche iche
Otu n’ime sayensi nke jiri okwu a mee ihe nke ukwuu bu mgbakọ na mwepụ, nke ya na sayensị kọmputa, astronomy, physics na ọzụzụ di iche-iche nyere ya aha di otua. N’akuku okpukperechi a tunyere ya na Chineke na chi di ebighebi, nke n’enweghi ohere ma obu oge; mana ka anyị hụ ka ụfọdụ mpaghara siri kọwaa ha.
A na-eji ya akọwa ụfọdụ arụmọrụ na-enweghị oke, usoro atọrọ na-akọwa ya na ụkpụrụ ndị na-esite na obere enweghị njedebe gaa na njedebe ọzọ. A na-ejikwa ya maka ọnụ ọgụgụ nke usoro, nke na-eme ka udo dị na cones; N'otu aka ahụ, ọnụọgụ nke enweghị njedebe zuru ezu na nke mbụ na nọmba ọnụọgụgụ na ọnụọgụ Kadinal enweghị ngwụcha.
Na akụkọ ihe mere eme
Ebumnuche ebighebi bụ nke mbụ amalitere mgbe onye English mathematician John Wallis tinyere ya na otu n’ime ọrụ sayensị ya. Enwere ike ihu akara ngosi a dika akwukwo mgbakọ na mwepu na akwukwo Arithmetic Infinitorum na 1656; emesia egosiri ya n'ụdị ihe osise na dịka anyị si mara ya taa dịka lemniscate (Ọgụgụ nwere akara ngosi nke 8) na mbipụta nke 1894, na ọrụ mgbakọ na mwepu nke onye sayensị Switzerland bụ Jacob Bernoulli. (1655-1705).
Agbanyeghị, enwere ike nkwenye, ebe akara a sitere na ihe ịrịba ama ndị ejiri mee ihe na alchemy, yana ụfọdụ ntụnyere okpukpe sitere na narị afọ nke 17. N'ebe ahụ akara ngosi ebighebi na-ezo aka na ọnya agwọ dị n'ụdị nke 8 akpọ uroboros.
Echiche ndị ọzọ agbalịrị ijikọta akara ngosi ebighebi na ọnọdụ Chineke na nke karịrị nke mmadụ. Otu a ka ọ dị n’ihe gbasara ọnọdụ ihu igwe a na-akpọ Analema ebe ọnụ ọgụgụ enweghi ngwụcha pụtara n’eluigwe n’enweghị nkọwa nkọwa ọ bụla; ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụ n'ọnọdụ dị iche iche dị iche iche na nke karịrị nke mmadụ.
Ozizi kachasị na nso nso a gbasara akụkọ sayensị na ihe nkiri, nke jikọtara ndị okike nke ndị na-abọ ọbọ na nnukwu ihe ngosi. ebighebi gauntlet, nke otu nwoke dị ike ma dị njọ nke a na-akpọ Tanos, bụ onye na-achọ iweghara ụwa: bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị na-eche na nhazi a m dịrị adị n'ezie, nke na-emepụta nnukwu akụkọ ifo na ụgha na nkwupụta.
Na mpaghara teknụzụ a, akara ma ọ bụ akara enweghị akara metụtara ụfọdụ asụsụ mmemme. Ndị a na-enye ohere ịnye uru pụrụ iche ma kpọọ ya enweghị njedebe; uru dị ka ndị a na-enwetara site na nsonaazụ, mgbe ịmechara ụfọdụ ọrụ mgbakọ na mwepụ na-enweghị isi ma ọ bụ nke a na-apụghị icheta (usoro nke naanị ndị mmemme na-aghọta).
Otú ọ dị, mgbe ị jụrụ otu n'ime ha, ha na-akọwa: Ha bụ ọrụ mgbagwoju anya gabigara oke, ọ ga-ekwe omume idozi mana ọ ga-abụ naanị ndị ọkachamara mmemme; nke mere na ha na-arụ ọrụ naanị na kọmputa, ha na-ekwusi ike na ọ bụrụ na ha mere n'asụsụ dị mfe, nsonaazụ ahụ tufuru njehie.
Mpaghara njikọ mmụọ nke mmụọ kọwara ya dịka "enweghi ngwụcha", ya bụ, ọ na -enye ya ihe na ngalaba. Ọ naghị anabata ihe mgbochi, ọ bụ enweghị mgbagha na enweghị mgbagha, yabụ ọ bụrụ na amachibidoro ya enweghị ike ịnabata mmachi ọ bụla.
Metaphysics na-ekwupụta na itinye oke na njedebe bụ ịgọnahụ eziokwu nke eluigwe na ala; gọnarị mkpọchi kpamkpam. N’ụzọ dị otú a nleghara anya nke ịgba bụ nnọọ asị nke ngbanye; na ndị ọzọ okwu, agọnarị oke niile bụ ihe na eziokwu nke ngụkọta na nkwenye zuru oke; ha na-atụlekwa na ihe enweghi oke nwere ike ịjụ ma yabụ ihe nwere ihe niile na-abụghị ya, yabụ adịghị adị.
Nke a echiche nke enweghi ngwụcha gosipụtara site metaphysics nwere ọtụtụ ma ọ bụ obere nkọwa zuru ezu nke ndị echiche a na-anọchi anya; n'ihi na ha na ọ bụghị naanị ihe nnọchianya ma ihe na-ahụ na kwa, ha anaghị agọnahụ ịdị adị ya ebe ọ bụ na ha enweghị oke.
Dị ka Aristotle si kwuo, echiche nwere njedebe na-agọnarị ịdị adị na-enweghị ngwụcha. N'ụzọ dị otú a mgbe ị na-ekwu okwu njedebe na enweghi ngwụcha Na echiche Aristotelian, ọ na-ezo aka n'anwụ na-enweghị ngwụcha nke na-emegide ịdị adị nke njedebe; Agbanyeghị, usoro ihe ọmụma ndị ọzọ na-ekwupụta na njedebe na ike bụ ọnụọgụ nke enwere ike ịgbakwunye ọnụ ọgụgụ ọzọ na-enweghị iru oke oke.
Ndị ọkà ihe ọmụma kwenyere na enweghị njedebe bụ ihe okike nke mmadụ, na karịsịa mgbe ọnụọgụ malitere ịpụta, exponentialite na-ewusi uru ọnụ ọgụgụ na-enweghị ngwụcha ike, ma ka a na-achọ ihe kpatara ya na ebe enwere ike nweta ọnụ ọgụgụ ahụ, ọ ga-anọgide na-eto ma na-abawanye. ; nke enweghị ụdị nzube ma ọ bụ mkpebi.
Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, anyị na-agba gị ume ka ị gụọ nke na-esote, ebe a na-egosipụtakwa akụkụ ndị na-adọrọ mmasị Onu ogugu: gini ka ha bu? atụmatụ, na ndị ọzọ
Ntọala Nkọwapụta 1 ruo 10: Nnukwu Ngwá Ọrụ
Ofchịkọta nọmba ndị sitere n'okike: gịnị ka ọ gụnyere?